Izinsizakusebenza ngokuqhathaniswa Nokusizakala | Martech Zone
NgoLwesine, Januwari 1, 2009 NgoMsombuluko, Januwari 1, 2018 Douglas Karr
Ngihlangabezane nevidiyo ka Tony Robbins at TED lokho kwakukhuthaza kakhulu. Omunye wemigqa yakhe uzwakale eyiqiniso kimi uqobo:
Omunye wemisebenzi enelisa kakhulu engake ngaba nayo ukuba yi-Integration Consultant yayo I-ExactTarget. Ngaleso sikhathi, i-ExactTarget yayine-interface application limited limited (API) kepha amakhasimende ethu ayekhula ngobuciko nokuzenzekelayo. Nsuku zonke bekungumhlangano nekhasimende ebinenkinga eyinkimbinkimbi kakhulu, futhi umsebenzi wami bekuwukuxazulula inkinga ngisebenzisa i-API yethu elula.
Impumelelo yami enkulu ngaleso sikhathi ukuthi mina njalo ngithole indlela yokufeza inhloso yokugcina. Uma ngabe API ayisekelanga indlela ethile, bengizosebenzisa inhlanganisela yedatha namakholi ukuyinqoba. Kwesinye isikhathi izixazululo bezinobuhlakani (futhi zithathe ukwethenjwa kobuchopho ukuzixazulula). Sasivame ukushayela amanye amantongomane ezisebenzi zokukhiqiza ngoba izixazululo zethu zazizokwenza izigidi ze- API izingcingo ukufeza umsebenzi.
Okusemqoka empumelelweni yami eqhubekayo ukuthi angivamile ukuthi 'cha', uma kwenzeka. Kwesinye isikhathi udinga ukuguqula indlela eya lapho uya khona. Indlela isisetshenziswa. Uma ingekho, udinga ukuba namasu futhi wakhe eyakho!
Ukungabi nayo izinsiza izaba zokungenzi izinto. Ukusebenziseka kabusha yikhono lokuthola izindlela zokwenza okuthile, ngaphandle kwezinsizakusebenza!
Nayi isethulo esigcwele sikaTony Robbins ku-TED. Isexwayiso: Usebenzisa izinto ezithile ezimibalabala.
Sibonga u U-Angela Maiers ukuthola!
Tags: I-christmasimeyili marketing roiumlando wokuthengiswa kokuthengiswaukwamukela izihambiI-latticeizinjini zeletiubuchwepheshe bokuthengisa
Jan 2, 2009 ku-4: 05 AM
Ngemuva kokufunda lokhu okuthunyelwe, nokulalela ithebhu kaRobbins, ngibheke izinqumo zami zeminyaka emisha, ngazidwengula ngabhala isinqumo esisodwa nje esisha: “Vele ukwenze”. Qaphela angishongo: “Vele ukwenze”.
Ngenkathi ngisengumphathi wezentengiso futhi ngiqasha abaphathi bezokuthengisa bengihlala ngibatshela ukuthi umsebenzi wabo ukwenza ukuthi ithengiswe hhayi ukuyithengisa. Umehluko usebenzisa zonke izinsiza ezikhona ukuvala ukuthengisa futhi uma izinsizakusebenza zingekho ukuzakha noma ukuba nezinsiza njengoba usho.
Lokhu okuthunyelwe okuhle ukuqala unyaka.
Jan 3, 2009 ngo-1: 46 PM
Iyiphi indlela engcono kunazo zonke lapho iqembu lakho liqonda futhi liphendula kulesi sikhuthazo?
Yini engingayenza ukufundisa lokhu ngempumelelo?
Jan 3, 2009 ngo-2: 52 PM
Kuqala ngobuholi, uDerek. Abaholi abakhulu bakhipha izaba. Kulungile ukuthi 'cha', kodwa akufanele neze kulunge ukuthi 'asikwazi ngoba…'. Uma ibhizinisi lazi ukuthi kufanele ngabe lenza okuthile, kudingeka libe namasu wokuthola ukuthi kanjani.
Jan 2, 2009 ngo-2: 11 PM
Siyabonga ngokwabelana ngalokhu - kuyakhuthaza futhi kuyasebenziseka.
Jan 2, 2009 ngo-4: 40 PM
Vele ukwenze njengoba kusho iSMB. Enye yezinto ezinzima kakhulu enginqobe empilweni ukuqonda ukuthi okokuqala ngikwenza okuthile ngeke kuphelele kepha ukuthi umzamo ngamunye engiwenzayo wokwenza okuthile usondele ekupheleleni.